THBP: ဖားသား မင်းဂျိုးနုချက်
မှတ်မိလာ မသိ ဖားသားနဲ. မှင်းဂျိုးနု နဲ. ဆီပြန်ချက်စော်။
ကိုယ့်ပါးမှာ ဆိုကေ တော့ စားဖား အလှပ တိကို ကြပ်တင်လို. မွှီးလို. ကြိုင်လို. တိကိုမှ ပပိုက်နနိုက် ငရုတ်သီးစစပ်နဲ. ချက်စော်။ အေဂုက ကိုယ်ချက်စော်တောင် မဟုတ်။ ယောက်ခမလောင်းချက်စော်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားစော် ဟီးဟီး။း)
ဖားသားကလေ့ ဈီးကြီးနဲ.ဆိုတာ ကိုယ့်ပြည်မှာပိုင် သိုက်ပြတ်ချက်နိုင်စော်က မဟုတ်။ စကေတဗွေချေရာ။ ယဂေလေ့ အလွမ်းပြေဗျယ်မဟုတ်လားယေ။ နိုဝင်ဘာလက ရန်ကုန်ကို ပြန်ချင်ပြန်ဖြစ်ဖို.။ ပြန်လာကေတော့ ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးလျှာရေကျဖို.ရာ ပျင်ထားကတ်ဖိ။း)
အဂုလေ့ လျှာရည်ကျချင်ကေ ကျလို.ရအောင် ဖားသားချက်တင်ပီးလိုက်ပါယင့် ဒေ။